Cimilada: Nin nuxurkiisu qoray 3 Million Wiki Articles
Muddada qodobkan, Oliver King, Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare macaamilka macaamilka, wuxuu kuu sheegi doonaa barnaamijka Svenker Johansson ee si guul leh u abuuray malaayiin maqaalo ah Wikipedia, iyo sida uu u noqday mid ka mid ah tifaftirayaasha caanka ah ee ugu caansan iyo kuwa koryaalka ah ee shabakada internetka. Macallinka Farsamada Buuggan waxaa si weyn loogu yaqaan Lsj. Waxa uu abuuray Lsjbot, oo ah tifaftire caan ah oo udubdhexaad ah, kaas oo ka caawiyay Svenker inay samayso qoraallo badan oo Wikipedia ah oo loogu talagalay qaabka iswiidhishka.
Ilaa hadda, Lsjbot waxay awood u yeelatay inay abuurto saddex malyan oo daabacan oo ku yaalla noocyo kala duwan oo Wikipedia ah waxayna ku fashilmeen in ka badan toban milyan oo shakhsi ah - korean passport. Johansson wuxuu sheegay in hawsha ugu weyni ay tahay in la abuuro maqaallo ku saabsan noocyada kala duwan ee xayawaanka iyo dhirta, badankooduna wuxuu ku xiran yahay hawshaas. Waxaa jirey waqtiyo markii Wikipedia uu lahaa tiro yar, laakiin Johansson ayaa sheeganeysa in ay yihiin maalmo muhiim ah oo maanta ah waana inay qeyb ka noqotaa mashiinada Google iyo Wikipedia.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xaddidyo aan ku sameyn karno qatarta. Bots waa muhiim sababtoo ah waxay ka caawiyaan sii wadaan shaqo badan iyo abuuraan articles kala duwan ee Wikipedia. Qaybta Ingiriisku waxay leedahay malaayiin maqaallo daabacan, iyo qoryo ayaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo kharribaadda. Meel kasta oo adduunka ah, waxaa laga helaa dayactirka iyo cusbooneysiinta alaabta hore, soo-galinta wada-hadallada jira, beddelaya qaybaha maqaalada Wikipedia iyo in lagu daro waraaqaha saxda ah ee saxda ah..
Robots ma qoraan taariikhda NASA?
Mid ka mid ah khataraha ugu weyn ee habkan waa articles gabagabada taariikhda NASA. Dad badan ayaa aaminsan in bots ay abuurtay qodobadaas iyo barnaamijyo badan oo toos ah ayaa lug ku leh daabacadooda. Sannadkii 2008, qaab algorithm waxaa loo yaqaan ClueBot II si guul ah u qorto shan iyo toban kun oo Wikipedia ah on asteroids. Waxay si fudud u qori doontaa macluumaadka dadweynaha iyo macluumaadka loo gudbiyo NASA's database-ka ilaa Wikipedia. Maqaalkani waxa lagu sameeyay qaab-dhismeedyada qoryaha, kuwaas oo badalay sumcaddooda waxayna isku xireen backlinks . Xirmooyinkaasi xitaa waxay bedeleen qaybaha Ingiriisiga ee maqaalada Wikipedia ee ku jira qaybaha Shiinaha. Sannadkii 2012, abuuristaani waa la baabi'iyay, dadkuna waxay qabsadeen shaqada oo dhan.
Kootarab ama robots ayaa maraya nidaamka oggolaanshaha gaarka ah
Moller ayaa sidoo kale ku qeexday in xogta habaysan ee Wikipedia iyo mashruucyadeeda lagu hayo siyaabo kala duwan, taas oo ka caawisa in ay dib u cusbooneysiiyaan waxyaalihii la cusbooneysiiyay ayna yareeyeen khatarta ku aaddan khaladaadka bani'aadamka ee si isdaba-joog ah u soo cusbooneysiinaya iyo soo dejinta lambarada.
Wikipedia waa mid ka mid ah bogagga internetka oo leh maqaalo badan. Johansson ayaa difaacay farsamooyinka abuurista malaayiin maqaal kali ah, isaga oo sheegay in uu sameeyey isticmaalka caqli-gal ah ee robots iyo bots iyo ay u ogolaadeen saraakiisha sare ka hor inta aan loo isticmaalo Wikipedia.